ज्योतिषको संगतले धार्मीक भएकी निता 'भागवत गीता' निर्देशन गर्दै - HarekKhabar.com
ज्योतिषको संगतले धार्मीक भएकी निता ‘भागवत गीता’ निर्देशन गर्दै
ज्योतीष हरिहर अधिकारी संगको सामिप्यतामा चुर्लुम्म डुबेकी नायीका निता ढुंगाना बहुत धार्मीक हुन थालेकी छिन् । श्रीमद भागवत गीता पढ्ने, पुजा आजा मात्र हैन, आजभोली त उनको टिकटकमा समेछ रातो पहेलो कालो टिका देखिन्छ । यसको श्रेय कतै न कतै हरिहरले त पाएका हैनन्? तर एक टेलिभिजन सो का क्रममा उनले आमेस ढुंगाना र हरिहर अधिकारीमा एकलाई रोज्न भन्दा उनले सकिनन् , आँखामा स्पष्ट प्रेम छल्किरहेको थियो । अब नीता ढुंगानाले वेब सिरिजमा हात हाल्दैछिन् । उनले आफ्नै लगानीमा ‘श्रीमद् भगवत गीता’ निर्माण गर्न लागेकी हुन् । कोरोना महामारी सामान्य भएपछि छायांकन सुरु हुने यो वेब सिरिजको निर्देशन पनि नीता स्वयंले गर्दैछिन् । २ करोडको लगातमा निर्माण हुने यो सिरिज करिब ४० भागको हुनेछ । सिरिजले अर्जुन र कृष्णको संवाद प्रस्तुत गर्नेछ ।
यो सिरिजमा रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी, वनिष शाहको सम्पादन, संजय लामाको छायांकन रहनेछ । सेट निर्माणमा समय लाग्ने भएका कारण केही समयपछि ‘श्रीमद् भगवत गीता’ को छायांकन सुरु हुने नीताले जानकारी दिएकी छन् । यसपछि उनले आफ्नै लगानीमा चलचित्र ‘माया’ पनि निर्माण गर्दैछिन् । यसमा उनको जोडी अभिनेता कोशिश क्षेत्रीसँग बाँधिदैछ ।
बाल कलाकारको रुपमा अभिनय करिअर सुरु गरेकी नीता सन् २००२ मा निर्माण भएको चलचित्र ‘मितिनी’ मा बाल कलाकारको रुपमा थिइन् । यसपछि उनले सन् २००८ मा चलचित्र ‘अजम्बरी नाता’ मा अभिनय गरिन् । उनले लिड अभिनेत्रीको रुपमा भने चलचित्र ‘किसान’ बाट ब्रेक पाएकी थिइन् । अहिलेसम्म उनले तीन दर्जनभन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छन् ।
‘नोटबुक, निर्भय, फूलै फूलको मौसम तिमीलाई, रातो टीका निधारमा, साइनो’ लगायतका चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी उनी लकडाउनभन्दा अगाडि चलचित्र ‘आकाशे खेती’ को छायांकनमा व्यस्त थिइन् । नीर शाह निर्देशित चलचित्र ‘मसान’ लाई नीताको सम्झनलायक चलचित्रको रुपमा लिने गरिन्छ । उनलाई चलचित्र ‘६ एकान ६’ ले भने दर्शकको ठूलो वर्गमा चिनाएको थियो ।
बलिउड नायिका कंगनाको अफिस बनाउने बिषयमा तानिए अम्बानी
नेपाली सुशान्त सिंग राजपुत नजरपुरमा आँउदै
सुशान्तको ड्रगको हालतमा अर्को भिडियो बाहिर
अमृताले कोरोनालाई डियर भनिन्!
महानायकको भुमिका निभाउदै राजेश हमाल
दिल देखी माफि माग्दै दिपा श्री (भिडियो सहित)
नेपाल र चिनको सीमा बिवाद: चिन भन्छ आफ्नै भुमी
यस वर्षको मनसुन थप लम्बिने
पछिल्लो २४ घण्टामा ११ सय ५४ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण
प्याजको पिरलोः भाउ बढेर हैरान, बिस्तारै मुल्य घट्ने
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक स्थगित
नारायण श्रेष्ठ , सरला तामाङ्ग, वन्दना दनुवार, आकृति थापा, रच्चु कार्की
दिपेश सिलवाल (कोरिया)
नाईमा लामिछाने (इजरायल)
माधव दुलाल (क्यानडा)
अमृता नेपाल (अमेरिका)